प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम दिनुभाछ, त्यतैतिर बेस्त भाछु : तिलकराम शर्मा (हिमाल) – GoodnewsKhabar
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम दिनुभाछ, त्यतैतिर बेस्त भाछु : तिलकराम शर्मा (हिमाल)
‘आफनो समर्थन गरी राखेको दुईतिहाइ संसदलाई विघटन गरेर कुनै चाँही मुर्खले चुनाव गराउँछ ?’
गुडन्यूज खबर । २०७७ माघ २५, आईतवार ०७:४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्धारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विगठन पछि देशको राजनीतिले फरक मोड लिएको छ । नेकपाका माउ नेताहरु ३ कित्तामा उभिएका छन । प्रचण्ड–नेपाल, केपी ओली र बामदेव । त्यसमा झन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेपछि झनै राजनीतिक विवाद चर्किदै गएको छ । अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज लगायतले सरकारको कदम विरुद्ध आवाज उठाईरहेका छन । अहिले पक्ष र विपक्षमा आ–आफनै तर्क बहस, अटकलबाजी चलिरहँदा बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षका नेता तिलकराम शर्मा (हिमाल) सगँ गरिएको सुन्ने खबरमा आधारित कुराकानी यस्तो छ ।
‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्ने बेला समेत संविधानको धारामा टेकेर गर्याका थिए भने अहिले चाँही केपी ओलीले त्यो भन्दा विपरित संविधानलाई नै पाखा लगाएर संसद विघटन गर्नुभयो । उहाँलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन ।’
१. सासंद ज्यू अहिले तपाईको कार्यबेस्तथाका बारे बताईदिनुहोस न ?
अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम दिनु भा,छ । किन भने उहाँले ठुलै राष्ट्रघात गर्नुभयो । संविधानको मर्म विपरित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर ।
पार्टी फुटाएर । त्यसो हुदाँ खेरी, अहिले त्यसका विरुद्ध जनता, कार्यकर्ता, नेताहरुको बीचमा छलफल चलिराख्या छ । अहिले त्यतैतिर नै बेस्त भइराख्या छु ।
२. भनेपछि केन्द्रिय राजनीतिमा गएको भुकम्पको तरङ्ग बर्दियामा पनि नराम्ररी परेको छ ?
परेको छ । अब केपीले चाँही बरर्बाद गर्नुभयो । यत्रो नेपाली जनताले जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त यो उपलब्धी, संबिधान सबै कुरालाई एकैचोटी ध्वस्त पार्ने काम उहाँले गर्नुभयो ।
गणतन्त्र, समावेशीता यो कुराले सबै मान्छेमा अलि–अलि पर्या छ । तर केपी ओलीले गलत तरिकाले यसलाई लगी रहनुभएको छ । यो बारेमा जनतालाई क्लियर गर्नु नै आवाश्यक छ ।
सबैतिर प्रभाव त परिहाल्छ, फेरी उहाँहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, कोहीलाई केन्द्रिय सदस्य बनायौं भन्नुहुन्छ, कोहीलाई मन्त्री बाँड्नु हुन्छ, कोहीलाई के गर्नुहुन्छ, हैन । जे मन लायो त्यही राष्ट्रलाई लुटेर जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने खालको चिन्तन उहाँहरुमा हाबी छ । हामी चाँही राष्ट्रलाई लुट पाइन्न, राष्ट्रलाई सिद्दाउन, जनतालाई दुख दिन पाइन्न भन्नेमा लाग्या छौं ।
३. अदालत (न्यायलय) बाट एक किसिमको फैसला त आउला नै ? किन आत्तिनु भएको ?
नाई, केन्द्र अदालतले गर्ला भनेर बसेर त हुन्न नी । यस्तो कुरोमा कहाँ हुन्छ त नी । अब प्रधानमन्त्रीले यस्तो खराब काम गर्ला भनेर कले सोच्या थियो ? कसैले पनि सोच्या थिएन, गर्दिए । अदालतले राम्रै गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? निर्वाचन आयोगले राम्रै गर्छ भन्ने त्यसको ग्यारेन्टी के छ ? त्यसको ग्यारेन्टी कले गर्न सक्छ ? हैन ।
सबभन्दा ठुलो ताकत (शक्ति) भन्या त जनता हो नी । जनताले खबरदारी पनि गर्छन । जनताले गलत गर्नेलाई गल्त्याएर फाल्छन पनि । राम्रो गर्नेलाई माया पनि गर्छन । त्यसो हुँदा खेरी जनताको बीचमा जान त पर्यो नी । सही, राम्रो, नराम्रो, गलत के, कसो भनेर जनतालाई जानकारी दिन पर्छ । जनतालाई बुझाउन आवाश्यक हुन्छ ।
जनतालाई भन्न पर्छ । जनतालाई अहिले के भा,छ भन्ने कुराको जानकारी हामीले दिईएन भने जनता प्रति हामी इमानदार हुन्नौं । हामी पनि बेइमान ठहरीन्छौं । त्यसो हुनाले जनतालाई जानकारी दिनको लागी पनि यो गर्न जरुरी छ ।
४. अनि नेकपाका माउ नेताहरु ३ कित्तामा उभिएपछि पार्टीका अन्य नेता, कार्यकर्ता, जनताहरु कता जाने ? जुन छ नी, नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह ?
हैन, यस्तो हो । अहिले उहाँहरुले पनि आफुलाई नेकपा भन्दै जानु भा,छ । निकै राम्रो गरेम भन्नुभाछ, । अहिले कसरी छुट्टाउने भन्ने कुराको चेतना । तपाईको यो प्रश्न छ नी, समयभन्दा धेरै पछाडी पर्यो जस्तो लाग्छ ।
किनभने जनताको चेतना अहिले भनेको २१ औं शताब्दीको हो । हामीले दुईटा चीजलाई जनताको बीचमा राख्त्यौ भने के सही, राम्रो, नराम्रो भनेर सजिलै जनताले छुट्टाउन सक्छन । यो कुरो एकदम चाँही देखिन्छ ।
जनताले छुट्टाउन सक्छन, त्यो क्षमता जनता सँग छ, । र हामीले सही कुरो जनतालाई भन्न पर्छ, यथार्थको जानकारी दिन पर्छ । त्यो भएपछि त, जनताले आफै गरिहाल्छन ।
५. कानूनी रुपमा त पार्टी छुट्टीएको छैन, संम्भावना के छ ?
अब कानूनी रुपमा नेकपा जोचाँही प्रचण्ड, माधव कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा छ । त्यही नेकपा नै आधिकारिक हुन्छ ।
६. भनेपछि, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय (नेकपा) को जोडिने संम्भावना तत्काल छैन ?
अ….तत्काल त्यस्तो संम्भावना केही छैन ।
७. अब बुझ्नु पर्ने कुरा चाँही के हो ? वर्तमान परिस्थितीमा ?
हो, मुख्य कुरा । हामीले यत्रो लडाँइ लडेर, संघर्ष गरेर जनताको ठुलो त्याग तपस्या बलिदानको बीचबाट यो गणतन्त्र, संघियता, समावेशी–समानुपात्तिक लगायत यि सबै कुरा ल्यायौं । तर उहाँले के गर्नु भो भन्दा हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्ने बेला समेत संविधानको धारामा टेकेर गर्याका थिए भने अहिले चाँही केपी ओलीले त्यो भन्दा विपरित संविधानलाई नै पाखा लगाएर संसद विघटन गर्नुभयो । उहाँलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन ।
यो कुरो मैले मात्र भन्या होइन की, सम्पुर्ण कानून विद, भूपु प्रधानन्यायधिस, नागरिक समाज, नेकपा मात्रै होइन की अन्य राजनीतिक दलहरु लगायतले यो भनी राख्यको स्थिती छ । यो कुरा सबैले बुझ्न पर्यो ।
त्यसो हुँदा गलत कुरालाई साथ दिन भएन, गलतको विरोध गर्न पर्यो । जोले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने हो, नेपाली जनता, पार्टीले टुलुटुलु हेर्दै बस्ने हो भने भोली कसैले तपाई हामी बसेको घरबाट ल तेरो घर यो होइन, तँ यहाँबाट निस्केर जाँ कोहीले भनिदियो भने, लठ्ठी लिएर बसीदियो भने हामीले त्यो घर छोडेर हिड्न पर्छ । त्यो घर छोडेर हिँड्ने ? त्यहाँ त जीवन मरण गरेर पनि आफु बसेको घर छोड्ने कुरा त हुदैन ।
त्यसैले यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने कुराहरु हो । यो कुराहरु एकदम मनन गर्नुपर्ने बिषय हो । देशमा सुशासन चाँहिन्छ । कानून चाहिन्छ, पद्धती चाहिन्छ, प्रक्रिया चाहिन्छ, पद्धती, प्रक्रिया, कानून विपरित गएर संविधान विपरित गएर कसैलाई पनि कुनै पनि काम गर्ने अधिकार छैन । त्यसो हुँदा त्यसरी गर्नुभनेको अराजगता हो । त्यसरी गर्नु भनेको पुरै अधिनायकबादी शैली हो ।
अधिनायकबादको चाँही विरुद्ध गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र सिद्धियो, लोकतन्त्र भन्ने कुरा चाँही रहेन । यहाँ जनतामाझ मान्छेहरुले अहिले चुनावको लली पप बाँडीराँछन, त्यो चुनाव हुनेवाला छैन ।
आफनो समर्थन गरी राखेको दुईतिहाइ संसदलाई विघटन गरेर कुनै चाँही मुर्खले चुनाव गराउँछ । भोली दुईतिहाई आउने ग्यारेन्टी छ ? ग्यारेन्टी त छैन । त्यो स्थितीमा भएको दुईतिहाईलाई सिद्धाउनु भनेको कुनै चुनाव गराउने निहत पनि होइन । त्यो भ्रममा कोही पनि नपर्न र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो गलत कदमका विरुद्ध सबै एक भएर लड्न चाँही आवाश्यक छ ।
सुर्खेत रोडका सौय बत्ति (सोलार) बिग्रीए, मर्मत हुन सकेन
२०७७ माघ २५, आईतवार ०७:४४
संवाददाता, नेपालगंज । बाँकेको नेपालगंज स्थित सुर्खेत रोड र सगैं जोडिएका चोक सडकमा जडित सौर्य बत्ति (सोलार) बिग्रीएको लामो समय बितेको छ । तर पनि कतैबाट मर्मतका लागी पहल हुन सकेको छैन । बिहान सबेरै देखी अबेर राती सम्म दैनिक जसो बेस्त भइरहने सुर्खेत रोडका कतिपय ठाउँहरु सवारी दुर्घटनाका हिसाबले […]
२०७७ मंसिर ६, शनिबार १७:०४
२०७७ भाद्र २९, सोमबार १७:४१
१० किलो ग्राम अफिम सहित दुई जना पक्राउ